Alemana Mampiaraka toerana, Saxony-Anhalt . - NY LAHATSARY AMIN'NY CHAT. Mampiaraka an-tserasera!
Alemana Mampiaraka toerana, Saxony-Anhalt .
InterFriendship alemana iray izay Mampiaraka toerana misahana manokana toy iraisam-pirenena sy ny fifandraisanaAo ny taona tantara, dia efa ny nofy an'arivony maro niangaran'ny vintana ny vehivavy sy ny vahiny.
Izahay dia faly foana hikarakara anao sy miezaka ny manampy sy hizara aminareo.
Raha toa ianao mitady C, koa ny vahiny, tia ny mpiara-miasa Atsinanan ny ho avy. Rehefa dinihina tokoa, dia nandresy ny fon ny vahoaka alemana.
Avy eo: anarana Mampiaraka toerana InterFriendship manome malalaka ny banky angona ny olona rehetra ny Alemaina, avy any amin'ny lavitra indrindra vazan-Alpes ny ranomasina Avaratra amin'ny tany rehetra sy ny faritra.
Raha toa ianao ka mitady mpiara-miasa ho amin'ny fiainana any Saxony-Anhalt, ianao no ao an-toerana. Saxony-Anhalt dia hita any amin'ny foibe. Miaina ao amin'ny tontolo Kristianina izay avaozina by Martin Luther. Koa any Alemaina, ary ny hafa firenena Eoropeana nandritra ny fanavaozana, manta, fahatsiarovana. Tamin'io andro io, Martsa, taona, satria ny fanavaozana dia nanambara ihany koa ny fanombohana ny faha- taonan'ny ny Fanorenana ny faran'ny herinandro.
Eto, ao afovoan-tanàna ny Saxony-Anhalt, ny Halle fety malaza alemana mpamoron-kira Georg Friedrich Handel natao.
Na izany aza, izany dia afaka mametraka anareo amin'ny toerana Mampiaraka ny fikarohana, raha tsy mitandrina ianao, satria Saxony-Anhalt dia hita ao ao Alemaina.
Nahoana ianao no te daty na hanambady, dia ny zava-miafina
Afaka anarana alemana sy ny lehilahy foana ny manoratra. Ny mponina Saxony-Anhalt dia.
Olona iray: momba ny.
Ny Fiarahana amin'ny aterineto ao amin'ny trano fandraisam-bahiny: momba ny. tapitrisa ny olona. Hansen-Anhalt mety ho tsara vintana tapakila ho avy ny vehivavy no sarotra kokoa ny zavatra ny olona dia efa nanova tanteraka ny fomba fisainana ny kolontsaina. Ao amin'ny fanjakana ambany Saxony-Anhalt dia ny teo aloha GDR.
Ireo olona ireo koa dia mahafantatra tsara kokoa ny fomba fisainana sy fihetsika noho ny Tandrefana.
Koa, maro ny olona hahatakatra sy miteny rosiana, ka ny foto-kevitra ny ody adidy dia Alemana Atsinanana.
Mety hanontany tena raha toa ka dia faly manomboka amin'ny firenena vaovao na tsy, fa izaho dia nihevitra aho fa hametraka ny Fiarahana manokana, Alemaina.
Firotsahana amin'ny lalana mahavariana, mifandray amin'ny vahiny sy ny manome azy ireo vaovao eritreritra sy ny fanantenana.
Mampiaraka ny olona ao
(Kumite) cabadaich roulette. Video cabadaich le girls
ny lahatsary amin'ny chat miaraka amin'ny ankizivavy maimaim-poana tsy an-kanavaka Fiarahana tsy misy fisoratana anarana maimaim-poana chat Mampiaraka manerana izao tontolo izao ny lahatsary amin'ny chat roulette manerana izao tontolo izao amin'ny chat roulette amin'ny ankizivavy plus maimaim-poana ny lahatsary amin'ny chat maimaim-poana amin'ny aterineto ny lahatsary fampidirana kisendrasendra chat amin'ny chat roulette girl free mba hitsena ny vehivavy